Naag laqabo oo hadana begro ah sheeko layaab leh aqriso | Markacadey.net Facebook
Warka oo Video	6:28 pm » Magaalada Kismaayo oo caawa laba qeyb u kala qeybsan (Dagaalo oo xilli kasta la filanaayo) 6:18 pm » Madaxweynaha Puntland oo markale si kulul u weeraray Madaxda Dowladda Soomaaliya 11:56 am » Buuggi Jubbaland baalki ugu dambeeyay maanta ayaa la rogay 11:31 am » Dagaal khasaaro dhaliyay oo maanta Ciidamada Dowladda ku dhex maray Magaalada Muqdisho 10:26 am » WAR DEG DEG: C/naasir Seeraar oo dagaalo ku dhawaaqay iyo xaalada Magaalada Kismaayo oo kacsan 8:54 am » Ciidamada Dowladda Sierra Leone oo ku wajahan Degmooyinka Jilib iyo Bu’aale 8:25 am » Hawlgalo culus oo maanta ka soconaaya Xaafadaha Ceel Qaloow iyo Buulo Xubeey 8:18 am » WAR DEG DEG: Qarax xoogan oo ka dhacay Magaalada Baydhabo 8:11 am » Ciidamada Dowladda iyo Amisom oo weeraraaya Degmada Baraawe 7:17 am » Madaxweyne-yaasha Igad oo sheegay inaysan waxba kama jirin Doorashadii Axmed Madoobe By: Jacfaryare // Jan 08 2013 at 5:31 pm // 2,943 Reads // Wararka Caalamka Naag laqabo oo hadana begro ah sheeko layaab leh aqriso Share Tweet
Maxamed waa 30 jir, isla markaana ah nin ganacsato kuna nool qurbaha. Maxamed ayaa markii hore guursadey gabar qurux badan oo ay ku dareen reerkooda, una dhashey labo caruuru ah. Maadaama la isku darey oo aysan jirin wax jaceel ah oo ay wadaagaan ayaa waxaa danta ku qasabtey in ay kala tagaan dhowr sano kadib, ayna is fureen iyaga oo raali kala ah. Furiinki ka dib Maxamed waxa uu u dhoofey dibada, xaaskiisi hore iyo caruurtiisiina ku hareen Africa.
Maxamed markii uu qurbaha yimid ayuu wuxuu u qalab qaatey in uu halkaas ka sii wada ganacsigii oo aheyd shaqada uu aqoon gaar ah u leeyehay isaga oo furtey tukaan weyn oo lagu iibiyo dharka iyo qalabyada electronics oo ay ka mid yihiin tvga, cellphones, iyo computarada. Tukaankaas ayaa noqdey mid caan ah, halkaas oo ay badanabaaba Somalida halkaas joogta had iyo jeer wax walba ka iibsan jireen, wuxuuna Maxamed ku lahaaa magac iyo maamuus bulshada Soomlaiyeed dhexdeeda, balse waxaa loogu yeeri jirey naaneys u gaar ah.
Sanadkii markii uu ahaa 2010 bilowgeedii ayaa waxey isbarteen gabar kale oo qurux badan oo magaceydu yahay Fartuun. Fartuun, sida hablaha Somaaliyeed lagu yiqiineyba, waxey aheyd gabar xishood badan, astur badan, cod macaan, socodka gaabisa, kuna darsatey ilka cadeyn ninkii arkaba kadaba dhaca.
Gabdhan ayaa waxey ka mid aheyed dumarka wax ka iibsada tukaanka uu Maxamed ka shaqeeyo. Isla markii uu Maxamed gabadhaas isha ku dhufteyba wuu is hayn waayey, wuxuuna go’aan ku gaarey inuu barto Fartuun inta aan looga hormarin. Wey is barteen, phone number waa la is dhaafsadey, in mudo lix bilood ku dhow ayeyena wada socdeen. Shukaansi dheer iyo isfaham kadib wey is jeclaadeen waxeyna ku soo gabagabeeyeen xiriirkoodii iney is guursadaan iyaga oo dhigety aroos yar oo diinta Islaamka raali ka tahey.
Laakiin Fartuun waxey markey yareyd soo martey gudniinka loo yaqaano fircooniga midkiisa ugu darnaa. Gabadhan oo ku dhalatey tuulo kamid ah Jubbdada hoose ee Soomaaliya ayaa waxaa loo gudey si xun iyada oo taas u soo martey xanuun badan oo bilo socdey, nasiib wanaagse wey caafimaadey inkastoo oo ay weligeedba ka walwaleysey sida loo gudey. Fartuun waxaas uma sheegin Maxamed oo ahaa ninkii ugu horeeyey oo ay la seexatey, oo waxeyba is laheyd waxba ma uu dareemayo oo wax walba waa caadi.
Nasiib daro Maxamed ayaa ogaadey iney wax jiraan isla habeenkii ugu horeeyey ee uu damcey in uu xaaskiisa u galmoodo. Si kasta oo uu isku dayaba wuu awoodi waayey in geedkiisa horey u galo farjigeeda. Muddo 4 saac kabadan ayuu kolba gabadha dhinac ka maraa oo isku dayey bal in uu mar uun horey geedkiisa u galo gudaha. Hase ka yaaabin, oo wuu awoodi waayey oo dhidid badan ayaa wejigiisa ka soo daatey isaga oo is leh “toloow maxaa jira, miyaan howl gabey” Fartuun oo la socota dhibka hasyta miskiin Maxamed ayaa iska seexatey iyada oo iska dhigtey war mooge. Nasiib daro Maxamed ma seexan, oo habeenkii ugu farxada badney ayaa waxey u noqotey habeenkii ugu naxdinata badneyd.
Fikir dheer iyo go’aan badan kadib ayuu Maxamed u qalab qaatey in uu shaqada ku guuleysto habeenkii labaad isaga oo is leh “war waa caadi in gabdhaha bikrada ah qaarkood ay aad u malaasan yihiin oo aanan
ciyaar ciyaar lagu furi karin” Wuxuuse Maxamed noo sheegey in geedkiisa uusan weyneyn oo uu yar yahey balse uu awoodi jirey in uu horey u galo xaaskiisii hore oo iyada laftigeedu bikro aheyd markuu guursadey. Maxamed oo waxba weydiin Fartuun ayaa sariirta lawada aadey isaga oo wadnaha sida tuug laqabtey u bood boodayaan, kana cabsi in mar labaad ku guul dareysto shaqada.
Shaqadii baa la guda galey, oo halka Fartuun kuba raaxeysaneyso waxa ninkeeda sameynayo maadaama ay sex ku cusub tahey, ayaa Maxamed isagu siddii habeenkii hore oo kale uu kolkba dhinac isku rog rogaa isaga oo siddii qof nafta ka baxeysa neefta tuuraya indhahiisa inuu kala furana diidey. Nasiib daro shaqadii guul daro ayey ku dhamaatey oo in geedkiisa hore u galo iska daaye xitaa biyihiisii baa lagu soo celiyey oo ma jiraan meel ay ka dusaan. Maxamed oo yaaban oo kala garan la’ in waxa uu sameynayo in ay tahey xaqiiq ama filim uu maskaxdiisa ka daawanyo ayaa iska seexdey habeenkaas.
Habeenba habeen ka danbeeya sidey shaqadu u socotey kuna guul dareysaney ayaa waxa uu go’aan ku gaarey in uu xaaska kala sheekeysto sida ay wax u jiraaan. Maadaama uu Maxamed ahaa nin wadaad ah ma uusan jecleyn in uu gabadha lugaheeda kala bixiyo oo uu si fiican bal u arko farjigeeda uuna ogaado waxa meesha ku dahaaran. Balse si kastaba xaalku ha ahaatee Fartuun wey uga sheekeysey wixii ku dhacey iyo sida xun ee loo gudey, kuna soo dhibtootey. Kolkuu sheekadaa maqley ayuu u naxey xaaskiisa isaga oo leh dhib ma leh oo waa alle amarkii.
Hadab sida la ogyahey Soomlida ceeb ayey u tahey oo nin iyo naagtiisa kama sheekeeyaan waxa ay sariirta ku sameeyaan, diinta Islaamkana ma ogola in waxaas laga sheekeeyo, balse runtii markii dhibaato xag caafimaad jirto waa caadi in dadka kugu dhow iyo takhaatiirtaba lala socodsiiyo si arinta wax looga qabto. Balse muddo hal sano ku dhow Maxamed iyo Fartuun wey is qabeen cid ay u sheegeen xitaa reerkooda ma jirin, oo dhaqtar ay aadaana iskaba daa! Fartuun weli siddii bey bikro ama virgin u tahey, Maxamedna geedkiisii wuuba ku daaley minadiisii ama biyihiisiina waxey noqdeen hal bacaad lagu lisey.
Maxamed iyo Fartuun wey isjecel yihiin oo sinaba iney u kala tagaan ma doonayaaan, balse Maxamed wax uu sameeyo wuu garan la’yahey. Waxa uu ku fakirey in uu iska furo una ogolaado iney saaxiibkiisa guursato mudo hal sano ah, kadib markii farjiga loo furo in uu saaxiibkiis iska furo gabdha kadibna ay iksu soo laabtaaan. Fartuun arintaas waxba kama qabto laaakiin marka hore arintaas diinta islaamka maxey ka qabtaaa? Marka labaad ma hubo in saaxiibkii, oo uusan weli u sheegin, in uu arintaas ka aqbalayo in uu furo gabdha kadib markii uu ku guuleysto shaqadii uu Maxamed ku holwgabey. Hadey caruur u dhashana kaba daran oo sinaba u furi maayo dhib la’aan.
Hadaba aqristayaasha sharafata leh, waxa uu Maxamed idinka codsanayaa inta uusan iskafurin ama dhaqtar u tegin, maxaad arintaas ka leedihiin. Marka hore ma maqasheen mase aragteen arintan oo kale in qof Soomaali ah oo ku dhacdey, hadey jirtnan sidey wax looga qabtey. Marka labaad maxey diinta Islaamka ka qabtaa in xaaska mudo gaaban la furo lana siiyo qof kale kadibna ay isku soo laabtaan mar danbe. Hadaba waad mahadsantihiin dhamaantiin waana idinka sugeynaa talo wacan iyo tusaale fiican. macsalaamo dhamaatiin
Baabuur ayaan isla raacnay qacdii koowaad ayaan ku jeclaaday “Waa gabar taariikh ku dhacday” Gabar Soomaaliyeed oo sheegaty in ay Doonayso In ay gaal ah oo ay la tumato Layaab: Haweenay markii ay seexada bilaabaysa cunisda waxay aragto xataa waxyaaba leesku qurxiyo Haweenay 10 Sano la qabay oo aan ninkeeda wax jaceyl ah ku hesay ayaa 10 sano kadin samaysay….. Xaflad Aroos oo mar qura furiin isku bedashay, cajiib! Haweeney Loo Furay Su’aalo Badan Oo Ay Weydiisa Ninkeeda, Talow Wa Maxay Su,alahas Quisadaan diiniga ah waa mid mudan in lagu cibro qaato hadaba akhri oo ku cibro qaado adna Disclaimer: The comments uploaded on this site do not necessarily represent or reflect the views of management and owner of MARKACADEY.net. We reserve the right to exclude comments that we deem to be inconsistent with our editorial standards. comments